Indawo yokuhlala eKouvola, Elimäki
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJorma
Amagumbi akhanyayo, ahlaziyiweyo ayi-3 + ikhitshi + i-sauna kunye nebalcony ekhazimlisiweyo. Le ndlu inazo zonke izinto eziluncedo, iTV, umatshini wokuhlamba izitya, ifriji, ifriji, i-oveni, isitovu, umenzi wekofu, imicrowave kunye nomatshini wokuhlamba. Indlu inefenitshala epheleleyo, izitya kunye nezinto zokucheba zezabantu abane. Le ndlu ibekwe kumgangatho wesibini okanye ophezulu wesakhiwo esincinci
Indawo yokuhlala ezolileyo, iivenkile, ibhanki, iMatkahuolto kunye nesikolo zikufutshane kakhulu. Umgama osuka kuHola weSithandathu umalunga nemayile. Indawo yokutyela kunye nepizzeria nazo zikufuphi. Umchebi / umlungisi weenwele kunye nepedicure zikwisakhiwo esinye.
4.82 ·Izimvo eziyi-28
Eyona nto idumileyo e-Elimäki yi-Mustila Arboretum. Edume ngezityalo zayo ezininzi kunye neentlobo zemithi. Ehlotyeni igadi intle ngokwenene. Ukuba uqala ukuya eKouvola, umzila wemoto weKymiRing, iziko lokutyibiliza laseMielakka kunye nepaki yokuzonwabisa yaseTykkimäki zikufanele ukutyelelwa.
Umbuki zindwendwe ngu- Jorma
Sihlala sidibana neendwendwe kwaye sibonise indawo yokuhlala. Iindwendwe zivumelekile ukuba zizive zikhululekile, kodwa siyafumaneka ukuba siyafuneka.